Olee otú ị na Doro Anya Cache on Android Devices?
1.2 Doro Anya iPad Data
Gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-selata? Olee otú ị pụrụ hụ na i nwere ike na nzuzo gị? Olee otú ị pụrụ onwe elu na mmezi bit nke ohere na ị pụrụ n'ezie ime na-enweghị?
Ihichapụ cache bụ azịza.
Ka ihe atụ, Google Chrome emepụta cache nke nkọwa nke ihe ọ bụla ị na-agagharị site na ihe nchọgharị na ekwentị gị. Ọ na-ewe mmezi ohere, slows ala ekwentị na ndị ọzọ nwere ike inwe ohere gị nchọgharị eme ma ọ bụrụ na ha na-gị Android ekwentị.
Cache bụ ndabere data, nke na-eji ngwaọrụ icheta n'oge gara aga. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime oge cache data bụ na-abaghị uru na hogs oké ego nke uwa na ngwaọrụ gị. Ọ nwekwara ike akwụsịlata ahụmahụ na ngwaọrụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji kpochapụ ihe cache mgbe nile. E nwere cache echekwara site ngwa, na nchọgharị. Ọzọkwa, kuki na-ewere ụfọdụ data.
Wondershare SafeEraser - Chebe Ozi Nkeonwe Gị
Na-adịgide adịgide Ihichapu Your Android & iPhone
Wepụ ehichapụ faịlụ na iOS Devices
Doro Anya Private Data on iOS Devices
Free Up Space na Speed ​​Up iDevices
Nkwado iPhone (iOS 6.1.6 na elu) na Android ngwaọrụ (si gam akporo 2.1 ka Android 6.0).
Part 1. Olee ikpochapụ ngwa cache na gam akporo ngwaọrụ
Ọ bụla ngwa-azọpụta ụfọdụ data n'ụdị cache, nke na-enye ohere ka ọ na-arụ otu ọrụ ọzọ na-enweghị ukwuu nhazi. Otú ọ dị, o siri ike ọ na-achọ otu data na-eme n'ọdịnihu. Lee ndị ole na ole nzọụkwụ na i nwere ike iji ikpochapụ cache nke ngwa.
Gaa na ntọala gị na Android ngwaọrụ. Ugbu a, enweta na égwu.
Na-esote na ihuenyo ị ga-ahụ ndepụta nke ngwa. Họrọ ngwa na-achọ cache ihicha. List na-egosi size nke ngwa na ngwaọrụ, nke bụ ọzọ ezigbo ihe gosiri na nke ego nke cache echekwara site na ngwa.
Mgbe ị na-ahọrọ na-eji ngwa, ị na-dugara App Ama ebe ị pụrụ ịhụ nju ọmụma nke data ji site ngwa. Gbadaa na-ahụ Cache data. Iji kpochapụ ihe data dị nnọọ enweta na Doro Anya Cache.
Ị ga-ikpochapụ cache nke ọ bụla ngwa n'otu n'otu. Na-eme ka n'aka na ngwa na-adịghị na-agba ọsọ na ndabere dị ka ị nwere ike ida ọmụma dị oké mkpa.
Part 2. Olee ikpochapụ nchọgharị cache si gam akporo
Nchọgharị ga-echekwa nza nke data n'ụdị cache. Nke a na-enye ohere cache nchọgharị na-emeghe a na saịtị ahụ na-enweghị ibudata otu website data ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-emeghe ọtụtụ ndị website mgbe nile, nwere ike ị chọrọ ka ihichapụ cache. Nchọgharị cache ụlọ ahịa akụkọ ihe mere eme, download, paswọọdụ nhazi data wdg Ị nwere ike iji n'elu usoro ikpochapụ nchọgharị cache ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịchịkwa nchọgharị enye ọzọ na-achịkwa nke data ị chọrọ ka ihichapụ n'ihi achọghị ihichapụ Ị na-azọpụta paswọọdụ na nbanye ozi.
Gaa n'elu nri akuku nke chrome na enweta na vetikal ntụpọ. Ugbu a gaa ntọala.
Ugbu a gbadaa na Advanced Atiya ma họrọ Nzuzo.
On ọzọ ihuenyo, na-aga na ala ka Doro Anya Nchọgharị Data.
Ị ga-nhọrọ dịgasị iche iche ịhọrọ site na. Ọ bụrụ na ị na-achọghị nchọgharị ichefu zọpụta paswọọdụ na autofill data, 'un-akọrọ ha.
Usoro a na-enye nnọọ mma akara n'elu nchọgharị data ị ihichapụ karịa n'elu usoro.
Part 3. Olee ikpochapụ kuki site Android
Kuki na-enye ohere website mara ihe ị na-achọ na internet na website ike na-enye yiri nhọrọ. Otú ọ dị, kuki otú nwere onwe ha size na ike ịdọrọ ala nchọgharị ọsọ. Ị ga-hichapụ kuki izu ole na ole na-nchọgharị ahụmahụ na ya kacha mma. Lee ndị nzọụkwụ na ị pụrụ ịgbaso ikpochapụ kuki.
Gaa elu nri akuku nke Chrome ka ịnweta menu. Họrọ akụkọ ihe mere eme.
Ugbu a na-eche maka chrome na-egosi na ị na-na nchọgharị akụkọ ihe mere. Right na ala e nwere nhọrọ "doro anya nchọgharị data". Enweta na ya.
Ị nwere ike ịhọrọ data ị chọrọ ka ihichapụ. Dị ka ị chọrọ ikpochapụ kuki eme n'aka, kuki nhọrọ enyocha. Ugbu a dị nnọọ enweta na doro anya.
Pịa ikpochapụ Android caches / kuki-adịgide adịgide.
The a bove usoro-achọ ka ị na-eme ọtụtụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ doro anya dị iche iche caches na kuki. E ọtụtụ ngwa ọdịnala na ekwentị gị, n'elu usoro ga-ewe oge. N'ihi ya, a atọ software ngwọta e nwere na-eme ọrụ ahụ na ole na ole clicks.
Part 4. 1 Pịa ikpochapụ Android caches / kuki na-adịgide adịgide
MobileGo na-mepụtara Wondershare na awade zuru ezu mobile ịba uru atụmatụ. Niile i nwere ime bụ wụnye MobileGo ngwa na gị android ngwaọrụ ma kwe ka ọ na-eme ọrụ maka gị.
Lee ndị atụmatụ nke MobileGo:
Ebe a bụ otú i nwere ike iji software iji kpochapụ ihe caches / kuki
Chọrọ: Wụnye MobileGo: >
Mepee software na ị ngwaọrụ. Ọ ga-egosi na nchekwa ọmụma. Dị nnọọ enweta na ekwentị Cleaner.
Ọ na-akpaghị aka na-enyocha maka cache, ratụ ratụ faịlụ, kuki, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-egosikwa ego nke uwa ga-free mgbe ihicha. Ugbu a dị nnọọ enweta na ọcha.
Mgbe ahụ a nkwenye usoro ga-egosipụta na-egosi na cache e ekpocha.
Ị nwere ike iji ndị a na-eji mgbe nile dị ka abụọ-atọ ụbọchị iji kpochapụ ihe cache. Usoro dị mfe ma na-ewe nanị ole na ole sekọnd ọcha ị ekwentị. Ugbu a, na-ekpocha ekwentị gị cache bụ dị mfe dị ka ọ na-akawanye!
Olee otú onwe elu Nchekwa nke "Documents na Data" na iPhone
10 Ụzọ ọcha ratụ ratụ faịlụ site iPhone
Olee otú ikpochapụ data site na iPod
Olee otú Kọwaa kuki na iPhone
Olee otú Kọwaa Space na gị iPhone
Olee otú Kọwaa History na iPhone
Olee otú onwe elu karịa Space na gị iOS 9 Ngwaọrụ
Ikpochapụ Data si gam akporo ntị na mbadamba - The Easy Way
Olee otú Kọwaa History, Cache, na kuki site iPad
> Resource> Clean-elu> Olee otú ị na Doro Anya Cache on Android Devices?